MYARF (Burmese): ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ်ပေး အသိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားမှုတွေလိုအပ်နေ
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ်ပေး အသိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားမှုတွေလိုအပ်နေ
Myanmar Muslim Media မှ ကူးယူ​ဖော်​ပြပါသည်​။
နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့မှာ ICMC က ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကိုအာရုံစိုက်မိခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရသလို မကြာခဏနှိပ်ကွပ်မှုခံနေရပါတယ်။ အကာအကွယ်ရဖို့အတွက် သူတို့တွေဟာ တတိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလှုံနေရပါတယ်။ ဒီလိုအခါသမယမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ Amina ရဲ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အခက်အခဲတွေက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးထုတစ်ရပ်လုံး သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးအတွက် အားအင်ဖြစ်စေပါတယ်။
အသက် ၃၁နှစ်အရွယ် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး Amina ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့နိုင်ငံမှာ သူမရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေရပြီး နှိပ်ကွပ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်အောင် မလေးရှားကို ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ပါတယ်။ “မလေးရှားက UNHCR မှာ ဒုက္ခသည်တစ်ယောက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ဆောင်မှုတွေကရှည်ကြာပြီးတော့ ရှုတ်ထွေးမှုတွေရှိတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်ရှာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မမှာ အသက် ၁၈နှစ်ကနေ ၃၀ကြားရှိတဲ့ ညီအစ်မသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ အစ်ကိုဖြစ်သူက ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့်အကြောသေခဲ့ရပါတယ်။ သူကလေးတုန်းက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို မရခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအသက်၃၅နှစ်ရှိပြီ စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူး သူ့ဘာသာသူသွားလာနိုင်ခြင်းမရှိသလို ထမင်းစားနိုင်စွမ်းလည်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်မအမေက သူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရပါတယ်။ ကျွန်မတစ်မိသားစုလုံး ရန်ကုန်မှာနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေအဲဒီကိုရောက်ဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နှိပ်ကွပ်ခံထားရပြီးတော့ ပြည်နယ်ဌာနတွေက ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ သူတို့တွေကိုနိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာမကြာခဏဆိုသလို အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့တွေဟာနှိပ်စက်ခံရပါတယ်။ အဖမ်းခံလိုက်ရတာနဲ့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်တော့ဘူး အဲဒီမှာနေရတဲ့ဘ၀က အရမ်းကိုအန္တရာယ်ရှိတယ်”လို့ Amina ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ Amina ဟာတက္ကသိုလ်အဆင့်ထ်ိပညာသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအရမ်းကိုရှားပါးတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ “ကျွန်မကံကောင်းခဲ့တာပါ ကျွန်မမိသားစု အထူးသဖြင့်ကျွန်မအမေက ကျွန်မတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ အားပေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မသင်ယူချင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်ကိုတော့သင်ယူခွင့်မရခဲ့ပါဘူး ရန်ကုန်မှာနိုင်ငံတကာ လူမှုဆက်ဆံရေး ဒီဂရီဘာသာရပ်ကို လျှောက်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီဘာသာရပ်ကိုကျွန်မ မသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး ရန်ကုန်ကိုခရီးထွက်ဖို့က ရိုဟင်ဂျာတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက စစ်တွေမြို့မှာ အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်” လို့သူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေက အရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ် ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေဆို ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပညာသင်ယူဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကတော်တော်လေးကို ပျံ့နှံ့နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်မှာပဲနေပြီး အိမ်ထောင်မှုကိစ္စတွေ ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲလို့ ယူဆသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပညာရေးကိုကြိုးစားဖို့ အရမ်းကိုရဲရင့်ရတယ်”လို့ Amina ကဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ Amina ဟာရန်ကုန်ကိုတရားမ၀င်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် တောင်ဘက်ကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ဆက်သွားတယ်နောက် ရထားနဲ့ထပ်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူမဟာမလေးရှားကိုခြေချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “ဒါအရမ်းကိုစွန့်စားရာကျတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မမှာရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မမိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်လေ။ သူတို့တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ သူတို့တွေကို အလုပ်သမားအဖြစ်လည်း အသိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။ ကျွန်မအစ်ကိုဟာ အကြောသေရောဂါဖြစ်နေရတယ် သူ့ကိုဆေးဝါးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်။” လို့သူမကဆိုပါတယ်။
“ကျွန်မမိသားစုလည်း ကျန်းမာရေးပြသနာတွေရှိနေပါတယ်။ သူတိုတွေက အသက်လည်းကြီးနေပြီ။ သူတို့ကိုကျွန်မထပ်မတွေ့နိုင်တော့မှာကို အရမ်းကိုစိုးရိမ်မိတယ်။ သူတို့ကိုထပ်တွေ့နိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အရေးကတော့ တတိယနိုင်ငံမှာအခြေချပြီးနိုင်ငံသားခံယူပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို တိုးရစ်တစ်ယောက်လိုပြန်လာနိုင်မယ်။ ကျွန်မသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် သူတို့တွေဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး မိသားစုထဲမှာကျွန်မတစ်ယောက်ပဲ ၀င်ငွေရှိနေတာ”လို့ Amina ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Amina က လက်ရှိမလေးရှားက NGOs တွေမှာ စကားပြန်အနေနဲ့ ကော အဖွဲ့အစည်းလေ့ကျင့်ရေးသမားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပါ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သူမအလုပ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကော ကျားမခွဲခြား နှိပ်ကွပ်စော်ကားခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့လူမျိုးတွေကို ကူညီဖို့အခွင့်အလမ်းရတာအတွက် ကျွန်မ၀မ်းသာမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဒီထက်ပိုလုပ်နိုင်သေးတယ်လို့ ခံစားရတယ် ကျွန်မမှာအိပ်မက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ပျံသန်းနေတဲ့အတောင်ပံတွေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီ အကြောင်းက ကျွန်မဟာနိုင်ငံမဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရတယ်လေ ကျွန်မပျံသန်းချင်သလောက် မပျံသန်းနိုင်ဘူး” လို့သူမကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေမှမဟုတ်ပါဘူး ဆီးရီးယား ဆိုမာလီယာ နဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံအများစုက အမျိုးသမီးတွေလည်း ကာကွယ်မှု ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစတွေကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ဖို့ ထောက်ခံအားပေးမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက မိခင်တွေ ဇနီးမယားတွေဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။သူတို့တွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကျိုးပြုပေးနိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစတွေသူတို့ဆီမှာ ရှိပါတယ်။
Source : ICMC.net
ဘာသာပြန် : ညောင်နီရွက်​
Posted by MYARF Arakan at 7:36 PM
Labels: Article copy
Yar Tin's Offline reader Apk
Download ecd1746561808fbdf9665fe701aeeaf7.apk from APKShared.net - APK Hosts File
Click on Logo to read News
အာရ်ကာန်နိုင်ငံသည် ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀၈၄နှစ်မှစ ၍ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ခေတ် ၄-ခေတ် ဒေညာဗာတီ(ခ)ဓည၀တီ၊ ဗေဆ...
၂၇၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် အင်းဒင် နှင့် သ၀န်ချောင်းကျေးရွာများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ ကို အစည်းအဝေးခေါ်ကာ သင်တို့သည် အုပ...
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ်ပေး အသိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားမှုတွေလိုအပ်နေ Myanmar Muslim Media မှ ကူးယူ​ဖော်​ပြပါသည်​။ နိုင်ငံတကာအမ...
ထူးဆန်းသော လောကကြီးမှာ ထူးဆန်းမှုတွေ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်တတ်၏။ ဤ သို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်နေသော ထူးဆန်းမှုတွေ ထဲတွင် လူသားမ...
SB2 ရဲမှ မတရားငွေညှစ်မှု၊ မောင်တော။
မောင်တောမြို့၊ အလယ်သံကျော် ၌ တာဝန်ကျနေသော SB2 ရဲဗိုလ်လတ် အောင်ကျောင်စိန်နှင့် အခြား SB တစ်ဦး တို့သည် သူတို့၏မွေးစား လမ်းပြဖြစ်သူ အလယ...
· ဖြစ်ချင်တာတွေ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်ခွင့်မသာ . . . လုပ်ချင်တာတွေ ဘယ်တော့မှ လုပ်ခွင့်မသာ . . . ပြောချင်တာတွေ ဘယ်တော့မှ ပြေ...
၁။ အဖော်မဲ့ အားငယ် ကိုးရာမဲ့ စိတ်ငယ် ပြုသမျှခံ ရိုဟင်ဂျာမှန် နောင်ရေးကိုတွေး ရတက်မအေး စိတ် အမြ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟူသည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း တို့ကို ပြည်သူများက မိမိတို့၏အသဲထဲက မဲပြားများဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ရောသ...
မိတ္တီလာနေ့ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာကြီး ငိုကြွေးသောနေ့
မိတ္တီလာနေ့ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာကြီး ငိုကြွေးသောနေ့ ရေးသားသူ -- ယျာတင်(ရိုဟင်းသား) RB က​ဗျာ 20.3.2015 အဲ့ဒီနေ့ပေါ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကေ...
ကျော်ရန် အဟန့် ဆွတ်ရန် အောင်ပန်း ရေကုန် ရေခမ်း လိုက်နာ စည်ကမ်း မမူ အကြမ်း ခံမည် အဖမ်း စိတ်က ပင်ပန်း မေ့ ၍ အနမ်း ရှေ့သို့...
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ်ပေး အသိအမှတ်ပြုတ...